By vijayafm on	 June 15, 2019 देश, फोटो फिचर, विजय परिवार, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
गैंडाकोट, जेठ ३२ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाका ४ वटा नगरपालिकाका महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुको भेला देवचुली नगरपालिकाको दलदलेमा सम्पन्न भएको छ ।
विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले हाम्रो लक्ष्य खुसी एवम् स्वस्थ सदस्य अन्र्तगत वृहत महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका भेला २०७६ को आयोजना गरेको हो । भेलामा करिब २०० महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । भेलाले ९ बुँदे साझा प्रतिवद्धता समेत जारी गरेको छ । साझा प्रतिवद्धतामा बालमैत्री नगर विकास गर्न मिलेर काम गर्ने, गर्भदेखी मृत्युसम्म सबै सुखी, खुसी र स्वस्थ मानवका लागि अभियान चलाउने उल्लेख छ । सुरक्षित मातृत्व एवम् पोषणको अवस्था सुधार गर्नका लागि निरन्तर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै पूर्ण खोपका लागि सचेतना गर्ने, सरसफाई, स्वास्थ्य वीमा गर्दै घरदैलो कार्यक्रम गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
सो क्रममा वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. केशवराज भुर्तेलले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । सुरक्षित मातृत्व, महिलामा देखिने स्वास्थ्य समस्या लगायत स्वस्थ रहने तरिकाबारे प्रशिक्षण गर्नुभएको हो । उहाँले स्वस्थ भए खुसी भईने र खुसी भए सुखी भईनेतर्फ सचेत गराउनुभएको थियो । नेपालमा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले गरेको कामले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको भन्दै विश्व समुदाय अध्ययन गर्न नेपाल आएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
२०–२५ वर्षअघि १ लाख गर्भवती महिला मध्ये ८ सय ९५ जनाको मृत्यु हुने गरेकोमा हाल त्यो घटेर २ सय ३९ मा पुगेको उहाँको भनाई थियो । यो घट्नुमा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले त्यो भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञाशा राखेका थिए । उनिहरुको समस्या डा. भुर्तेलले समाधान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा पोषण विज्ञ मनोज वस्यालले पोषण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पोषणयुक्त खानाले स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले बिना तलब स्वयम्सेवी रुपमा सेवा प्रदान गरेको बताउँदै राज्यले उनिहरुलाई गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको बताउनुभयो । जिल्लाको हकमा असार १० अगावै सवै स्थानिय तहहरुसँगको सामुहिक छलफल र सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई अझै शसक्त गराउन विकूले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठले विकूले सञ्चालन गरेका हरेक कार्य प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउनुभयो । स्वस्थ समुदाय बनाउने अभिभारा सहित अघि वढिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई प्रशिक्षण गराउनु सरहानिय कार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले देवचुली नगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
मध्यविन्दु नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले सामाजिक, आर्थिक र समृद्धिका लागि विकूले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभयो । उहाँले महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई सुविधा र अधिकार दिलाउन नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
नेफ्स्कुनका पुर्व सञ्चालक एवम् विकूका पूर्व अध्यक्ष ईन्द्रराज ज्योती पौडेलले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउन महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका अहोरात्र खटेको उल्लेख गर्दै उनिहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो । स्वस्थ र सुरक्षित मातृत्वका लागि विकू सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै उहाँले यस खालको कार्यक्रम ल्याईएको बताउनुभयो ।
विकूका संस्थापक अध्यक्ष खेमराज सापकोटाले सडकमा स्वास्थ्य विगार्ने खालका विज्ञापन गर्ने गरेको पाईने तर स्वास्थ्य सुधारतर्फका विज्ञापन नगर्ने गरेको पाईएको उल्लेख गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका स्वस्थ समाज निर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विकूका अध्यक्ष केशव प्रसाद सापकोटाले आफ्ना सदस्यहरुको खुसीका लागि स्वास्थ्यको अवधारणा ल्याईएको बताउनुभयो । विकूले जन्मदेखी मृत्युसम्म सदस्य हितका कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै तर अब जन्मनु अघि नै कोखदेखी चितासम्मको कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुष गरि कार्यक्रम ल्याईएको बताउनुभयो । हरेक सेकेण्ड महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले अर्काको जीवन रक्षाका लागि काम गरिरहेको सन्दर्भमा विकूले कुपोषण न्युनिकरणका लागि सहकार्य गर्न लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै विकूका उपाध्यक्ष त्रैलोक्यनाथ खरेलले जबसम्म स्वस्थ भईदैन तबसम्म खुसी भईदैन भन्दै हाम्रो लक्ष्य खुसी एवम् स्वस्थ सदस्य अन्र्तगत कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै विकूका सचिव गोविन्द रिमालले जिल्लामा १२ वटा सेवा केन्द्रमार्फत ५७ हजार वढि सदस्यलाई वित्तिय र गैर वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
गैंडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका र मध्यविन्दु नगरपालिकाको सहकार्यमा साहारा पार्टी प्यालेस देवचुलीमा शनिबार सम्पन्न भेलामा जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी प्रमुख एवं प्रतिनिधीको उपस्थिती रहेको थियो ।